१२ गाउँका ब्राह्मण–ठाकुरहरुको बैठक, सामूहिक ब’ला’त्कारका आ’रोपीलाई जोगाउने निर्णय – Sanchar Patrika
१२ गाउँका ब्राह्मण–ठाकुरहरुको बैठक, सामूहिक ब’ला’त्कारका आ’रोपीलाई जोगाउने निर्णय
October 3, 2020 118
काठमाडौं। भारतको उत्तर प्रदेशको हाथरस जिल्लामा एक किशोरीलाई सामूहिक ब’ला’त्कार गरी जिब्रो का’टिदिएर ह’त्या गरिएपछि यसले सिंगो भारत हल्लिएको छ । तर, घटना भएको हाथरस जिल्लामा कथित माथिल्लो जातिकाहरुले अत्यन्तै अमानवीय निर्णय गरेका छन् । भारतीय अखबार दैनिक भास्करका अनुसार यहाँका १२ गाउँका ब्राह्मण र ठाकुरहरुले बैठक बसेर सामूहिका ब’ला’त्कार र ह’त्याका अभियुक्तहरुलाई जोगाउन अभियान चलाउने निर्णय गरेका छन् ।
समाचारअनुसार शुक्रबार बुलगढी गाउँ नजिकै बघना गाउँमा ठाकुर समुदायको पञ्चायत भएको छ जसमा आ’रोपीहरुको रिहाइको लागि अभियान चलाउने निर्णय भएको छ । यो पञ्चायतमा बुलगढी र आसपासका १ दर्जन गाउँका ब्राह्मण र ठाकुरहरु सहभागी थिए । उनीहरुको बैठकले यो घटनाको आडमा सवर्ण समुदायलाई नि’शाना बनाइएको र सवर्णविरुद्ध दलितहरुको आ’क्रोश बढाइएको बताएको छ ।
उनीहरुले मेडिकल रिपोर्टमा सामूहिक ब’ला’त्कारको पुष्टि नभएको भन्दै दुवै पक्षको नारको टेस्टको माग गरेका छन् । उनीहरुले पीडितको गाउँमा बाहिरका कसैलाई छिर्न नदिने निर्णय पनि गरेका छन् । हिजो मात्र ठाकुर समुदायका एक विधायकले किशोरीको ह’त्यामा परिवारकै हात रहेको आ’रोप लगाएका थिए ।
Prevहामी चाडै फिल्म बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको विपक्षमा छौः दीपकराज
Nextसार्वजनिक यातायात खुल्यो, यात्रु छैनन्
वर्षा राउतले माफि मागिसकेकी छिन् तर हामी शतप्रतिशत ठिक छैनौ,संजोगले यस्तो किन भने ? फेरी बर्षा लाई के भयो ? (भिडियो हेर्नुहोस)
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित